Laxogenin mushonga-wakavakirwa pamushonga wakagadzirirwa kukura mhasuru uye nekuchengetedza muviri wakakwana. Icho chiri chekirasi ye brassinosteroids, ndiko kuti, steroid-sezvinhu zvinowedzera kukura kwezvirimwa. Izvo hazvikanganise iyo yemahomoni system. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa 5a-hydroxy Laxogenin yakadzidzwa nemaJapan kubva 1960. Icho chimwe chemakwenzi mukusimbisa muviri uye kugwinya zvokuwedzera isina divi zvinokonzerwa uye inogona kuiswa nevarume nevakadzi.
Laxogenin chinhu chitsva chinogadzirwa muAmerican neEuropean indasitiri yemitambo. Yakachengeteka, isiri-mahormone, isiri-doping. Izvo zvivakwa, zvokwadi, zvakawedzeredzwa, asi izvi hazvibvise chokwadi chekushanda kwayo kwakanaka. Iyo chete yakakosha kudzikisira ndeyehurombo bioavailability. Kunyangwe mamwe marangi atove nemhinduro kudambudziko iri, iyo phagosomal system.
Chinhu chikuru cheiyi fuma ndiko kwayo kwayakabva. Ehe, iyo inowanikwa kubva kumidziyo yezvirimwa nenzira dzekugadzira.
Chinhu chinogadzirwa nemiti icho chinokutendera iwe kuvaka hombe mhasuru mavhoriyamu uye ine simba rine simba-kupisa mhedzisiro isingawanzo.
Laxogenin inoshanda sei?
Laxogenin chinhu chinotorwa nemuti. Inowanikwa zvakagadzirwa nekuzviparadzanisa kubva pamidzi yemuti usingagumi wekukwira unonzi Siebold's Sassaparilla.
Siebold's Sassaparilla inowanikwa kuChina neJapan uye iri miti yakasvibira yemizambiringa. Laxogenin yakabva mumuti uyu ndeye steroidal sapogenin. Zvinotonyanya kukosha, Laxogenin ndezveboka reanonzi brassinosteroids.
Brassinosteroids inoumba boka remakumi mana emaSteroid anogadzirwa chete kubva kumiti. Yakagadzirwa muzvirimwa, izvi zvinhu zvinobatsira mukukura kwavo uye nekuwedzera simba.
Iyi kirasi yemakwenzi steroid yakaratidza zvakanakisa mhedzisiro maererano nesimba rekuvaka.
Brassinosteroids inokonzeresa anabolic (mhasuru kukura) mhedzisiro nekuwedzera mwero weprotini synthesis uye kunonoka chiyero cheprotein kuputsika. Izvi zvinopa:
kunatsiridza kuita kwemitambo;
kuderedzwa kwakawanda kwemafuta akawanda.
Uyezve, iyo anabolic athari inowanikwa pasina divi zvinokonzerwa. Ehe, Laxogenin haigone kupa ese mabhenefiti ayo asingabvumidzwe steroid zvinodhaka zvinogona kupa. Asi zvakadaro, inogona kupa zvakanakira.
kushandisa Laxogenin, iwe unogona kuwana 6-7 mapaundi eakaonda mhasuru mashoma mune imwe kosi.
Zvinogona kuitika mhedzisiro kana uchishandisa Laxogenin
Kana iwe wakambotsvaga pawebhu kuti uwane ruzivo nezve prohormones uye wedzera kuvaka muviri, pamwe wakambosangana nenyaya dzinotyisa nezve kurasikirwa nebvudzi, gynecomastia, uye neakanyanya acne.
Laxogenin ndeyeboka rechinhu chinonzi brassinosteroids. Mune zvidzidzo zvakati wandei, brassinosteroids yakaratidza chakadudzwa anabolic maitiro pasina chero divi zvinokonzerwa izvo zvinogona kunzi zvinoshandiswa nekushandisa kweimwe prohormones.
Kana iwe uchifanira kuyedzwa steroids kana prohormones, Laxogenin haizoratidze bvunzo yakanaka.
Ehezve, kushandiswa kweLacosgenin hakuzombovi nemhedzisiro yakanyanyisa iyo steroid inogona kupa, asi iwe unogona kutarisira yakafanana mhedzisiro.
Nzira yakanakisa yekushandisa Laxogenin
Zvichienderana nemugadziri, kusungwa kwemushonga mumacapsule kana hupfu uye saizi yavo inogona kusiyana zvishoma, saka heino mirairo yakajairwa yekushandisa mushonga.
The muyero inogona kubva pa25 kusvika ku200 mg. A muyero ye100 mg yakashandiswa panguva dzekuedzwa kwekiriniki.
Nguva yekosi. Kazhinji kurudziro yekosi 4, 8, masvondo gumi nemaviri kana kuenderera mberi.
Tsigiro panzira. Sezvo Laxogenenin isina huturu pachiropa, hapana chikonzero chekutsigira kosi.
Nzira yekubatanidza zvinodhaka. Chinhu chakanaka pamusoro Laxogenin ndeyekuti iwe unogona kuisanganisa nyore nyore nemamwe akawanda madhiragi, senge echisikigo testosterone ekuwedzera prohormones, uye post-kutenderera kurapa mishonga.
Mimwe mishonga, senge mahomoni evanabolic, Inogona kupa zvinobatsira. Asi steroids chishandiso chisiri pamutemo, inofambiswa neakawanda ane njodzi divi zvinokonzerwa uye njodzi dzepamutemo. Zvinogona kuitika matambudziko anosanganisira kudzvinyirira kugadzirwa kwe testosterone, kuwedzera kweserogen mumuviri wemurume, gynecomastia, kurasikirwa kwebvudzi, uye prostatic hyperplasia. Rondedzero yezvinetso zvingangodaro iri kure nekupedzisa.
Laxogenin imwe nzira yakachengeteka. Chigadzirwa chemuti hachisi hormone kana kushandurwa kuita mahormone mukukwikwidza kwekuchinja kwezvinhu. saka, Laxogenin anoenzanisa zvakanaka ne prohormones.
Laxogenin haidzivirire synthesis ye testosterone mumagonads. Iyo enzyme aromatase haiite pairi, zvinoreva kuti maestrogens munzira anoramba ari mukati mechimiro chemuviri. Saizvozvo, hapana njodzi ye gynecomastia, kuchengetwa kwemvura, uye mimwe mhedzisiro isingafadzi inosanganisirwa nekuwedzera kweestrogen kusungwa.
Sezvo Laxogenin isingakanganise iyo yakasarudzika mahormone muyero, inogona kushandiswa nevarume nevakadzi, uye mushure mekosi, hapana chikonzero chekurapa-kutenderera kurapwa. Nharo yakasimba inotsigira chigadzirwa chakachengeteka uye chinoshanda kushomeka kwekudzoka. Iyo tsandanyama yemhasuru yakawanikwa pane kosi icharamba iinewe.
Laxogenin haina kuiswa mune rondedzero yemishonga inorambidzwa; kutenga uye mashandisiro ayo hazvibatanidzi njodzi dzepamutemo.
ichi kuvaka muviri kuwedzera gives isiri-doping bvunzo mhedzisiro uye haipe nhema mhedzisiro. Aya maficha anofanirwa kutariswa nevatambi vanokwikwidza vari kuita doping control maitiro.
Haisi iyo yekutanga hormone.
Izvo hazvina kukanganisa testosterone synthesis.
Izvo hazviwedzere mazinga eestrogen.
Iko hakuna njodzi ye gynecomastia, kurasikirwa kwebvudzi.
Iko hakuna kudzoka shure mushure mefundo.
Haisi kuiswa mune rondedzero yemishonga inorambidzwa.
Haisi doping, haina kusarudzwa nedoping bvunzo.
Ndeipi mhedzisiro yeLaxogenin?
Laxogenin inopindirana neiyo steroid mahormone receptors mune adipose uye mhasuru nyama. Kubva pakuona kwemaitiro ekuita, zvakakodzera kuzvienzanisa nesarudzo uyerogen receptor modulators SARM. Nekudaro, zviri pamutemo hazvisi zveboka iri remishonga yekutsigira kwemishonga yekudzidzisa.
Mune nyama yemhasuru, izvi kuvaka muviri kuwedzera inoshanda seyakavharidzira uye inokonzeresa pakugadzira mapuroteni mamorekuru. Inononoka kudzora kuparadzwa kweprotein, kusanganisa pamwe nekumisikidza kuumbwa kwemapurotini eakaomesesa contractile, kunotungamira mukuwedzera kwemhasuru uye kuwedzera kwesimba zviratidzo.
Mune adipose tishu, Laxogenin anoita sechinhu chinobatsira kuti lipolytic pezvakaitwa. Inokurumidza kuputsa kweakaomesesa lipids uye kusunungurwa kwemafuta acids muropa. Mushure meizvozvo, ivo vanove anowanikwa sosi yesimba uye anogona kushandiswa nemhasuru kugadzira adenosine triphosphate mamorekuru. Panguva imwecheteyo, inoderedza lipogenesis, iyo, inosanganiswa nekukurumidza kupisa mafuta, inobatsira mukuvandudzika mukuumbwa kwemuviri uye kuratidzwa kwekuzorora kwemhasuru.
kushandiswa kweprotein synthesis uye anabolic maitiro;
kukurumidza uye kwakakwana kupora kubva mukushanda;
kunoderedza pasi catabolism;
kuwedzera kunoonekwa kwemhasuru uremu;
kuvhara lipogenesis uye mafuta ekuchengetedza;
yakawedzera mitengo ye lipolysis uye fatty acid oxidation;
kuderera muzana muzana adipose tishu;
kusimbisa kusunungurwa kwemisungo;
kuvandudza kuumbwa kwemuviri.
Yakasimwa-yakasimwa prohormones zvakaratidzwa kuwedzera musuru mashoma pasina divi zvinokonzerwa senge gynecomastia kana kurasikirwa kwebvudzi.
Kana iwe uchida kuchengetedza ako testosterone mazinga kana kuenda kune inotevera nhanho pasina njodzi ye divi zvinokonzerwa, Laxogenin ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.